တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အခါတော်နေ့
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီ - ၁၇၊ အင်္ဂါနေ့။
မြန်မာ့ ၁၂ လ ရာသီ အခါတော်နေ့တွေ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ထဲမှာ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ကို နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အခါတော်နေ့ လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆရာတော် မာဂဓီ (သာစည်) ရဲ့ အခါတော်နေ့များ စာအုပ်ထဲက အနည်းငယ် ကောက်နုတ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အခါတော်နေ့တွင် စေတီပုထိုးနှင့် ရုပ်ပွားတော်များကို ရေသပ္ပါယ်ခြင်း၊ ကျောင်းကန်ဘုရားသို့ သွားရောက်၍ ရေကုသိုလ်ပြုခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွားတို့အား ဂါရ၀ပြုခြင်း၊ ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဇီဝိတဒါန သက်လွှတ်ပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက် ပေးသင့်ပါသည်။
၁) ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ အနိဋ္ဌာရုံတွေ ပပျောက်ပြီး ဣဋ္ဌာရုံအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြစေရန်။
၂)ဘေးဥပဒ် အန္တရာယ် ကင်းဝေးကြစေရန်။
၃) မကောင်းသော စိတ်ဓာတ်များကို ဖယ်ရှားပြီး ကောင်းသော စိတ်ဓာတ်များကို မွေးမြူကြစေရန်။
၄) အရှက်နှင့် အကြောက် လောကပါလ တရားနှစ်ပါး ထွန်းကားကြစေရန်။
၅)ဗြဟ္မာ့ဝိဟာရ တရားလေးပါး ထွန်းကား ပြန့်ပွားစေရန်။
၆) မင်္ဂလာ တရားတော်များ ထွန်းကား ပြန့်ပွားစေရန်။
ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အခါတော်နေ့မှာ မင်္ဂလသုတ်ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ် လေ့ရှိပါတယ်။ ၃၈-ဖြာ မင်္ဂလာကတော့ အားလုံး သိပြီးသားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ မင်္ဂလာ ၃၈-ပါးထဲက မင်္ဂလာ ၂-ပါး အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဂါရဝေါစ နဲ့ နိဝါတောစ မင်္ဂလာ ၂-ပါးပါ။ ဘာကြောင့် ဒီမင်္ဂလာ ၂-ပါးကိုမှ ရွေးပြောရသလဲ ဆိုတော့ ….
မတ်လ ၁၂ ရက် နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ “နွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ .. ပိစိ ဆိုသူက ခုလို မေးထားပါတယ်။
မကြီး မေ၊ အချိန် ရရင် ဂါရဝေါစ နိဝါတောစ ဆိုတာလေးကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြပေးပါလား။
အဲဒီတုန်းက အချိန်မရတာကတကြောင်း ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီလောက်သာ သိထားတာက တကြောင်းမို့ တိုတိုတုတ်တုတ် သိသလောက်ပဲ ဖြေခဲ့ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ တယ် မကျေနပ်လှဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ထုံးစံအတိုင်း အဖေ့စာအုပ်စင် မွှေတော့ ကံအားလျော်စွာ အရှင်ပဏ္ဍိတ မထေရ် ရေးသားတဲ့ “မင်္ဂလသုတ် လက်စွဲ” စာအုပ်ကလေး တွေ့ပါတယ်။ လှန်လှောဖတ်ကြည့်တော့ မင်္ဂလသုတ်ကို အကျယ်ဖွင့်ဆို ဟောပြထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းတဲ့ စာတအုပ်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ပိစိနဲ့တကွ ကျမဘလော့ဖတ်သူများ အတွက် ဒီမင်္ဂလာ ၂-ပါး ကို မကျဉ်းမကျယ် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဂါရဝေါစ (ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း)
(၁) ဘုရား၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမှာ အထွတ်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘုရားကို ရိုသေလေးစား ဖို့လိုပါတယ်။
(၂) တရား၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ တရားတော်ကို ရိုသေလေးစား ဖို့လိုပါတယ်။
(၃) သံဃာ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေ ပြန့်ပွားအောင် သာသနာ့ဝန် ထမ်းဆောင်နေကြသော သံဃာတော်များကိုလည်း ရိုသေလေးစားဖို့ လိုပါတယ်။
(၄) သိက္ခာ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများ (ရဟန်းဆိုလျှင် ရဟန်းဝိနည်း၊ လူဆိုလျှင် လူ့ကျင့်ဝတ် သီလ) ကို ရိုသေလေးစားဖို့ လိုပါတယ်။
(၅) သမာဓိ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
မိမိကိုယ် နှုတ် စိတ် ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ သမာဓိကိုလည်း ရိုသေလေးစားပြီး ဣနြေ္ဒဖောက်ပြားခြင်း မရှိရပါဘူး။ ဣနြေ္ဒဖောက်ပြားရင် လူလည်း လူ့အလျောက်၊ ရဟန်းလည်း ရဟန်း အလျောက် သီလသိက္ခာ ယိုယွင်း ပျက်စီးတတ်လို့ သူတပါး ကြည်ညိုခြင်း ရိုသေလေးစားခြင်းတို့ကို မခံယူနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သမာဓိ၌ ရိုသေလေးစားဖို့ လိုပါတယ်။
(၆) အပ္ပမာဒ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
မိမိရဲ့ သန္တာန်မှာ သတိကင်းလွတ်မယ်ဆိုရင် အကုသိုလ်တွေ ၀င်ရောက်ဖြစ်ပေါ် နိုင်တာကြောင့် မမေ့မလျော့သော သတိမှာလည်း ရိုသေလေးစားဖို့ လိုပါတယ်။
(၇) ပဋိသန္ဓာရ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
တဦးနှင့်တဦး မေတ္တာမပျက်စေရန် အဆက်အစပ်ပြုခြင်း၊ ပြေပြစ်ချောမောအောင် ပြုခြင်း (ပဋိသန္ဓာရ) ဟာ လောကကျင့်ဝတ် တပါးမို့ ပဋိသန္ဓာရကို ရိုသေလေးစားဖို့ လိုပါတယ်။ ပဋိသန္ဓာရမှာ
က။ ပစ္စည်းဖြင့် စေ့စပ်ပြေပြစ်အောင် ပြလုပ်တဲ့ ပစ္စယပဋိသန္ဓာရ
ခ။ သွန်သင်ဆုံးမ နည်းပေးလမ်းပြ ပြုလုပ်တဲ့ ဓမ္မပဋိသန္ဓာရ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ပဋိသန္ဓာရ ဟာ ဒါနတမျိုး ဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းကျိုးခပ်သ်ိမ်းကို ပြီးမြောက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပဋိသန္ဓာရ ကို ရိုသေလေးစားရပါမယ်။
(၈) ဟိရီ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချ စက်ဆုတ်တဲ့ မကောင်းမှုတွေကို ပြုလုပ်ရမှာ ရှက်ခြင်း ဆိုတဲ့ ဟိရီ ကို ရိုသေလေးစား ဖို့လိုပါတယ်။ ဟိရီကို ရိုသေလေးစားခြင်းဖြင့် မကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းက လွတ်ကင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) သြတ္တပ္ပ၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
ယခုဘ၀မှာ ခံယူရမယ့် ဘေးဒုက္ခ၊ သေပြီးနောက် ခံယူရမယ့် အပါယ်ဘေးဒုက္ခ တို့ကို ဆင်ခြင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာ သြတ္တပ္ပ ဖြစ်ပါတယ်။ သြတ္တပ္ပကိုလည်း ရိုသေလေးစားပြီး မိမိသန္တာန်မှာ တည်စေရပါမယ်။ ဟိရီ သြတ္တပ္ပ ချို့ငဲ့ ကင်းမဲ့သူဟာ တိရစ္ဆာန်နဲ့ မခြားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဟိရီနဲ့ သြတ္တပ္ပကို ရိုသေလေးစား ဖို့လိုပါတယ်။
(၁၀) အချင်းချင်း၌ ရိုသေလေးစားခြင်း။
အတူတကွ နေဖော်နေဖက်ခြင်း၊ မိဘနှင့်သားသမီး၊ ဆရာနှင့် တပည့်၊ ညီအကို မောင်နှမချင်း၊ အလုပ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ စာသင်ဖက်၊ ခရီးသွားဖက်၊ ရဟန်းနှင့်ဒကာ၊ နိုင်ငံအချင်းချင်း စသဖြင့် တဦးကိုတဦး ရိုသေလေးစားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အချင်းချင်း ရိုသေလေးစားမှု ရှိမယ်ဆိုရင် မတရားမှု ယုတ်မာမှုတွေ အားလုံး ပပျောက်နိုင်တယ်လို့ ဆရာတော်က ရေးသားထားပါတယ်။
နိဝါတောစ (မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း)
ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လိုလျှင် နိဝါတ ရှိရမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
မိမိစိတ်ကို မာန်မာနမထားဘဲ ထောင်လွှားခြင်း မရှိခြင်းဟာ ရှေ့ဆောင်ကောင်း၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်း၊ လူကြီးလူကောင်း တယောက် ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း တပါးဖြစ်ပါတယ်။
လူတချို့ဟာ ပညာဂုဏ်၊ ဥစ္စာဂုဏ်၊ စည်းစိမ်ဂုဏ်၊ ကောင်းမှုဂုဏ်တွေကြောင့် ပလွှားမာန်ထောင်တတ်တယ်။
တချို့ကတော့ အနည်းငယ်မျှလောက်သော ဂုဏ်ကို အများအပြားမှတ်ယူပြီး ထောင်လွှားတတ်တယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထောင်လွှား မာန်မာနကို လုံးဝမထားသင့်ပါဘူး။
မာန်မာန မထားဘဲ စိတ်ကို နှိမ့်ချရမယ်ဆိုလို့ ယုတ်ညံ့သေးသိမ်တဲ့စိတ် အောက်တန်းစား အခြေအနေကို ရောက်တဲ့ စိတ်မျိုး ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါ။ မာနနဲ့ယှဉ်ပြီး ၀င့်ဝါပလွှား မော်ကြွား မာန်ထောင်တဲ့ စိတ်မျိုးကို ပယ်ရှားပြီး မြင့်မြတ်တဲ့ သဘောထားနည်းနဲ့ မိမိရဲ့စိတ်ကို နှိမ့်ချထားရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မာနယှဉ်ပြီး မာန်တက်တဲ့သူဟာ ဥစ္စာ၊ ပညာ၊ ကောင်းမှု၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တို့မှ ဆုတ်ယုတ်ပြီး ဒုက္ခတွေ့ရ တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မာနကို မြင့်မြတ်သောစိတ်၊ အမြော်အမြင်ကြီးသော စိတ်တွေနဲ့ ပယ်ရှားပြီး ရိုသေလေးစား ထိုက်သူတို့ကို ရိုသေလေးစားသောအားဖြင့် ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ မင်္ဂလာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာတော်ရဲ့ ရှင်းလင်း ရေးသားချက်တွေဟာ အလွန်ကောင်းလို့ အကျယ်တ၀င့် အစအဆုံး တင်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် မကျဉ်းမကျယ် ပြန်ချုံ့ပြီး ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ လွဲမှားမှုများ တွေ့ခဲ့ပါက အကျဉ်းချုံးသော ကျမမှာသာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်များ ဖြစ်ကြပါစေရှင် …
Posted by မေဓာဝီ at 2:14 AM
Labels: သင်္ကြန်, အခါကြီးရက်ကြီး
Happy Myanmar Neaw Year 1370!
Your posts are really very great.
During like these Thingyan days, I read your April 2007 Archive again n again for everyday. All the words n facts about Thingyan here are really very valuable.
Wish to see this kinda of info more. Thanksalot.